Alex Ifeanyichukwu Ekwueme - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Alex Ifeanyichụkwụ Ekwụeme GCON (Amụrụ ya na Ọktoba 21, na afọ 1932 - ọnwụrụ na ọnwa Novemba 19, na afọ 2017) ọ bụ onye mbụ a hopụtara ibụ Onye na-eso onye isi ala, na-afo 1979 rụo 1983.
Ọ bụ Ide na obodo Oko na Anambra State, ebe nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ "Prof Lazarus Ekwueme" na achi obodo Oko. Ndi mgbakọ ọchichi na ala Agụata chiri ya ide na obodo ha. Obodo nka nke a'nakpọ Agụta Local Government na Anambra Stati nke ekewara ụzọ iri anọ na anọ (44). Ekwụeme nwụrụ na elekere iri n'abali, na ụbọchi Ụka 19 Novemba n'afọ 2017. Ọ bụ na ụlọ ọgwụ nke a n'akpọ "London clinic" ka ọnwụrụ, ebugara ya n'ụlọ ọgwụ a mgbe ọdara ada n'ụlọ ya na Enugu.
O bidoro ọmụmụ akwụkwọ na "St John's Anglican Central School", na Ekwụlọbia, o wee gawa kwa n-irụ igụ akwụkwụ na King's College, Lagos.Ọ bụ otu onye n-ime ndi enyere egoenyemaka igụ akwụkwọ na ala bekee a na akpọ United States of America (nka mere o jiri bụrụ onye mbụ na Nigeria enyere ụdi egoenyemaka nka. ), Alex gara Mahadụm a na akpọ University of Washington ebe o nwetere asambodo a na-akpọ "bachelọ digrii" na itụpụta ụkporo ụlọ na-atụmatụ obodo (bachelor's degree in Architecture and city planning). O nwete kwara asambodo ọzọ nke bekee na akpọ masitas digrii na atụmatụ Obodo mepere emepe (urban planning).O gagwara na irụ nwete kwa asambodo ndi ọzọ na soshiọlọji, akụkọ ihe mere eme (history),filọsọfi na iwụ (law) na mahadum a na-akpọ University of London. O mechara laghachi ụlọ akwụkwọ i nwete asambodo ọzọ di elụ ndi bekee na-akpo "Ph.D. na itụpụta ụkporo ụlọ Architecture na "University of Strathclyde, tụpụ ya aga ụlọ akwụkwọ iwụ na Nigeria.
Ụgbụ a ọ bụ onye isi oche na elekọta na akwado atụmatụ otụ ndi "Nigerian Institute of Architects". ọ gbara mbọ na ihe gbasara ụba na mekọ ndi obodo ya tụpụ ụwa nile amata ya di ka onye na-esota onye isi ala na afọ 1979. Tinyere ihe nile omere, Dr. Ekwụeme kwadoro igwe ụmụ akwụkwọ n-inye ha egonyemaka i ga ụlọ akwụkwọ na Nigeria ma na ala bekee. O jere ozi ọtụtụ afọ na ọgbakọ na hụ maka Owụwụ ụlọ na Anambra Steti. Nwa amadi ya nwere obi ume ala, ọ bụ dinkpa e ji aga mba.ihe ndi a ma fọdụ bụ ihe ndi omere na ala Nigeria. Ike agwụ beghi nwa amadi a na irụ ọrụ na obodo Nigeria.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Ifeanyichukwu_Ekwueme&oldid=62325
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 18 Ọnwaìsiì 2018, mgbe 19:11